Nyowani mikuru-fomati SIGMA fp L uye Atomos Ninja V kugoneswa ye4kp30 uye HDp120 ProRes RAW kurekodha | NAB Ratidza Nhau | 2021 NAB Ratidza Media Partner uye Mugadziri weNAB Ratidza LIVE. Broadcast Injiniya Nhau
musha » Content Creation » Nyowani yakakura-fomati SIGMA fp L uye Atomos Ninja V kugoneswa ye4kp30 uye HDp120 ProRes RAW kurekodha
Atomos anofara kuzivisa kuti iyo itsva SIGMA fp L ichakwanisa kurekodha Apple ProRes RAW pamusoro HDMI painosanganiswa neNinja V 5 ”HDR yekutarisa-rekodhi. Iyo Ninja V inorekodha inosvika ku4Kp30 12-bit ProRes RAW vhidhiyo kubva ku61-megapixel sensor sensor ine anowanikwa gumi nematanhatu emasimba akasimba.
Iyo nyowani SIGMA fp L ndiyo diki diki uye yakareruka yakakura fomati kamera *. Iyo inouya neiyo yakasimba uye isina uremu kufa-yakakanda aruminiyamu yakakomberedzwa, ichiirema pane ingori 375g. Yakakwana kune drone uye gimbal kupfura. Iyo inoshandisa L-Gomo, iyo lens gomo rakagadziriswa kune isina girazi makamera. Kubvumira iyo kuti ishandiswe nemalensi akasiyana siyana anopiwa naLeica, Panasonic uye SIGMA ivo pachavo.
-L-Mount chiratidzo chakanyoreswa cheLeica Kamera AG.
* Kubva munaKurume, 2021
Iyo chaiyo 5 ”1000nit HDR yakakwira kupenya kuratidzwa kweiyo Ninja V inobvumira vashandisi kuti vaone chiratidzo cheRAW muHDR mune sarudzo yemhando dzeHLG nePQ (HDR10). Iyo yekutarisisa inopa yekubata-skrini yekubata kune zvishandiso senge waveforms, kukudza kana kuita peaking kuitira kuti vashandisi vatarise kutarisa kune yega kona uye voita chero gadziriso kuti vatore yakakwana HDR kana SDR kupfurwa.
Ninja V & SIGMA fp L Kubatanidzwa
SIGMA fp L uye Ninja V mubatanidzwa ndeye yakakwana compact rig set-up yezviitiko senge inochengetwa ruoko, kuisa mumakona akasimba kana kukwira pamakwenzi. Mitambo yeTV, indie mafirimu, zvigadzirwa zvemakambani, zvinyorwa uye kunyange mafirimu mafirimu uye wedzera kune izvo kugona kunyora ProRes RAW. Iko kusanganisa kunopa vagadziri vemafirimu kudhura kumisikidza-uye sarudzo yekushandisa ProRes RAW.
White Balance uye ISO Tsigiro
Atomos uye SIGMA yakazvipira kuratidza vashandisi nehunyanzvi hwakazara hweProRes RAW fomati zvinoreva kuti kuvapa mukana wakanyanya pakusvika pakugadzirisa codec. SIGMA fp L saka inotsigira zvizere White Balance uye ISO yekugadzirisa inotsvedza muFinal Cut Pro.
Atomos CEO Jeromy Young akati: "Ndiri kufara kuti SIGMA iri kuwedzera imwe inoshamisa kamera kune yavo line-up neRAW kunze kugona Atomos tarisa zvinyorwa. Wedzera pane izvi kuzvipira kwavo pakubata izere simba uye kugona kweProRes RAW nekutsikirira metadata yese yekamera inofanirwa kubvumidza iwo huwandu hwakawanda hwekushanduka mumashure mekugadzirwa "
Atomos inodada nekuwedzera imwezve inonakidza kamera kune inogara ichikura ProRes RAW eco-system. Munguva yose ye2020 uye kupinda muna 2021 ProRes RAW yakaramba ichiwedzera kuwedzera pamwe neanopfuura makumi matatu makamera anotsigira iyo Atomos uye ProRes RAW mubatanidzwa, ichisimudzira chinzvimbo chayo seyakajairwa indasitiri yeRAW vhidhiyo yekutora. Izvo zvakanaka kuti uone kuti ProRes RAW iri kuwedzera kutsigirwa pane akawanda kamera mamodheru kubva kune akasiyana kamera vagadziri, zvichiratidza kuti vakazvipira zvakasimba uye vari kudyara mune ramangwana reProRes RAW kurekodha. ProRes RAW inosanganisa inoonekwa uye yekufambisa mabhenefiti eRAW vhidhiyo ine inoshamisa chaiyo-nguva kuita kweProRes. Iyo fomati inopa vagadziri vemafirimu yakakura nzvimbo kana vachigadzirisa kutaridzika kwemifananidzo yavo uye vachiwedzera kupenya uye nemumvuri ruzivo, zvichiita kuti ive yakanaka kune HDR workflows. Ose maProRes RAW, uye epamusoro bandwidth, yakamanikidzwa ProRes RAW HQ inotsigirwa. Anogadzirika masaizi emafaira anomhanyisa uye kurerutsa kufambisa faira, midhiya manejimendi, uye kuchengetedza. ProRes RAW inotsigirwa zvizere muFinal Cut Pro, Adobe Premiere Pro uye Avid Media Composer pamwe chete neunganidzwa wemamwe maapplication anosanganisira ASSIMILATE SCRATCH, Colourward, FilmLight Baselight uye Grass Valley Edius.
Atomos iripo kubatsira rubatsiro rwekugadzira kupedza kuburikidza nemakambani ekugadzirwa kwezvinhu kuburikidza nokusika nyore nyore kushandisa, kutema-4K uye HD Apple ProRes kuongorora / zvinyorwa. Izvi zvigadzirwa zvinopa nyanzvi dzevhidhiyo kukurumidza, mhando yepamusoro uye inodhura sisitimu yekugadzira, kunyangwe ivo vachigadzira vezvenhau, YouTube, TV kana cinema. Atomos inoramba ichiratidza kuzvipira kwayo kuisa vashandisi kutanga kuburikidza nekuenderera mberi kwezvitsva pazvinhu zvinoshamisa zvematengo. Iyo kambani yakatanga AtomOS operating system yakatsaurirwa kuvhidhiyo yekurekodha neyakanaka uye intuitive touchscreen user interface uye yaivewo yekutanga kugadzirisa maitiro eUnited Apple ProRes RAW yekurekodha nekamera makamera. Atomos iri muAustralia nemahofisi muUSA, Japan, China, UK neGerman uye ine pasi rese yekuparadzira shamwari netiweki.
Previous: CRAS Preps Pro Audio Vadzidzi veHupenyu Mushure mekupedza Kudzidza
Zvadaro: Anozivikanwa Colourist Steven Bodner Anopinda Photo Shop